बैंकको १०० रुपैंया अंकित ४९ करोडको सेयरमा आजै आवेदन दिनुहोस् ! - Arthatantra.com
बैंकको १०० रुपैंया अंकित ४९ करोडको सेयरमा आजै आवेदन दिनुहोस् !
काठमाडौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर भर्ने म्याद आईतबार सकिंदैछ । असोज २३ गतेदेखि १०ः३ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४९ लाख ३१ हजार ८३५ कित्ता अर्थात् ४९ करोड ३१ लाख रुपैंया बराबरको सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । आज कार्यालय समयभित्र यो सेयर भरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यो हकप्रदमा भदौ २९ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त हकप्रदको बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्सले गरेको छ । हकप्रदमा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौं र ओमको केन्द्रीय कार्यालय पोखरालगायत अधिकांश शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, वीरगंज, नेपालगंज, इटहरी र धनगढी शाखाबाट पनि यो हकप्रदमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पर्ने भएकाले ओमले हकप्रदको बाटो रोजेको हो । पुँजी वृद्धिकै लागि ओम र मनास्लु विकास बैंक एक आपसमा गाभिएर असार २ गतेदेखि एकीकृत कारोबार पनि सुरु भइसकेको छ । मनास्लु गाभिएपछि ओमको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख ४४ हजार ७९५ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले यही चुक्ता पुँजीबाट ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद बिक्रीपछि ओमको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित मितिः२०७४ कार्तिक २६
उन्नाइस कम्पनीको १३ अर्ब बढीको हकप्रद शेयर आउँदै, कुन कुन हुन् कम्पनी ? काठमाडौँ । विभिन्न १९ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन […]
पर्यटनको योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता ! सृजना राणा, नेपालका महिला उद्यमीहरुको बीचमा परिचित नाम हो । होटल अन्नपूर्णकी संचालिका, […]